Abaculi abatsha aba-10 abaBalaseleyo ku-2016 | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Abaculi abatsha aba-10 abaBalaseleyo ku-2016
Abaculi abatsha aba-10 abaBalaseleyo ku-2016
I-kaleidoscopic head-rush ye-jazz, i-ambient, ne-krautrock, i-Berlin trio Nonkeen ikhuphe iirekhodi ezimbini zonyaka ngokubamba imilingo yokuzenzekelayo yeeseshoni zokurekhoda eziphuculweyo.UJulia Soler
Uluhlu lokuphela konyaka lwemveli yinto ebomileyo, ecekeceke isoloko iluhlaza okotshani, ucofa ibhatyi ebanjwa yintlanzi ephanga ezona nzulu zisezantsi kwelona chibi lingcolileyo. Kungenxa yokuba ngelixa uluhlu lweendidi ezahlukileyo kunye nezandi ziyindlela ekhawulezayo yokukhuthaza incoko, konke kunjalo ukunciphisa -Ukuhlanganiswa kwelizwe elibalulekileyo lomntu yenye ye-avant-garde, isandi esimnandi seethoni ezili-12 kwi-documentary malunga nomzi-mveliso wokuqala wezinto zokudlala zesini oluhlaza.
Apha kuMqwalaseli, sele uzibonile izilungiso zethu ezingenampazamo zokufumana izibonelelo-sikubetha ngazo Iingoma zethu ezi-50 eziBalaseleyo , Uluhlu oluqulunqwe ngababhali abahlanu kubandakanya nam ukuba, ngokoluvo lwethu oluthobekileyo, lubonisa isixa esikhulu somhlaba wommandla sonic esiwugubungele kulo nyaka.
Kwaye ngenxa yokuba sizama ukugcina umbono onolwazi kwiintlobo ezithile zezandi kunye nezandi ezingafumani luthando lwaneleyo kwezinye iimpapasho, sibajongile abo, nathi-phezulu kwethu I-R & B. , ihip-hop , kuvavanyo kunye ijazz Iialbham zonyaka zonke zamkelwa luluntu lwazo, zigula kukubona uhlobo oluthandayo xa kuthelekiswa nezandi ezizezona zenzelwe iindlebe ezincinci, ezinamayeza.
Siphinde safunda ukuba abahlali bathambekele ngakumbi ekufundeni izinto ezigwetyiweyo, kuba ii-albhamu ezibandakanyiweyo kwincoko zonke zikwindawo efanayo yokudlala ngoonyana. Kuyavela ukuba abalandeli beJazz bafunde lukhulu kunaye nabani na.
Kodwa kuthiwani ngamagcisa asakhasayo, i iiobob , ukuba uya kuthanda, ukungcungcutheka kunye neengxelo zokuqala ezizukileyo kwihlabathi zihlala zilityalwa ekuvukeni kushiywe ngamagama amakhulu akhupha ii-albhamu kwiveki enye?
Ukuba uMbonisi woMculo ubanga ukuba uzibophelele ekujikijeleni amatye kunye nokuncothula iingcambu ezisekwe kumdla wokufumanisa ukuba yintoni entsha, kusekho uluhlu oluthile olungafumanekiyo. Kuya kufuneka wazi ezona rekhodi zintle zika-2016 usenokuba uphulukene nazo, kwaye kufanelekile ukuba wazi ezinye zeengcali ezintsha kulo nyaka.
Ke ezo zizintlu ezimbini endizokwabelana ngazo nawe kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, ukuqala ngeqela lamagcisa am amatsha kulo nyaka.
Amanqaku ambalwa malunga nolu luhlu-kwezi zizathu zikhankanyiweyo, andikhethi mntu. Ungaya kwiPitchfork ngaloo nto. Ndisebenzisa igama elitsha ngokukhululekileyo, ukubandakanya kungekuphela nje amagcisa kolu luhlu abathi bakhuphe abo Ityala kulo nyaka. Abanye babo bakhupha icwecwe labo lesibini okanye lesithathu, kodwa zintsha ngoku njengoko zintsha kum, kuwe, nakubantu bomculo ukubhala okukhulu, ngaphandle kweendawo zabo kwangoko okanye izangqa zentlalo. Isandi esihle? Ngokuqinisekileyo sicinga njalo. Kwaye ngaphezu koko, asinakulinda ukubona ukuba zeziphi iziphithiphithi abanomsindo abasigcinele zona kule minyaka izayo.
Ukhe wamva uTerrace Martin ngaphambili-okoko waqala ukurekhoda ikhefu kanomathotholo, le Crenshaw, Calif., Umntwana wadlala indima yomlawuli womculo kunye nekati yeseshoni kuninzi lwee-hip-hop ezinkulu ezibiza ngokuba ngabahlobo abasondeleyo.
Bendingazi ukuba yayinguMartin ebambe ezantsi iibhodi yezitshixo kunye neesampuli zikaSnoop Dogg xa ndambona evulela iRed Hot Chili Peppers kwisikolo samabanga aphakamileyo. Igama lakhe lavela kwakhona kunyaka ophelileyo xa uKendrick Lamar wakhululwa Ukukhupha ibhabhathane, njengoMartin wayekhonza njengomlawuli womculo kwaye wabhala uninzi lwee-jazz-meets-G-Funk amalungiselelo awanika irekhodi isandi sawo esahlukileyo, isizukulwane.
Umjelo wezakhono zikaMartin imbali yomculo omnyama waseMelika kwi-sonic flux etyibilikayo, uxabiso oluphuhliswe ekukhuleni ecaleni kweKamasi Washington enkulu kunye neThundercat, wandixelela eMontreal Jazz Fest kulo nyaka.
Nangona uMartin ekhuphe ii-albhamu ezininzi zehip-hop phantsi kwegama lakhe, uyalukhupha olu luhlu ngo-2016 IVelvet Portraits , u-G-Funk -fake irekhodi le-jazz elipheka isitya esifanayo sonic ayenzileyo Ibhabhathane Ngelixa esiya enzulwini kancinci kwilizwe le-jazz wathandana esemncinci emva kokufunda notata kaKamasi Washington. Yiza ngeRosas Glasper kunye neTundercat cameos, hlala uzenzele kunye ne-sexy grooves.
IVelvet Portraits zininzi izinto-ileta yothando kwinkcubeko eyahlukeneyo yengingqi yakhe kwiingoma ezinje ngeBromale, umthambo ekubonakaliseni ubungangamsha kumalungiselelo akhe kwiingoma ezinje ngokuLinda ngomonde ngomonde, kunye nokubonwa kwenkqubo yakhe yoyilo kulungiselelo olupheleleyo Ibhabhathane Ukwakhiwa, Umntu ofayo. UMartin usenokuba ebekhona iminyaka, kodwa njengetalente entsha kwindawo yejezi, uyakudinga ngoku.
Isihlalo semoto Headrest
ISihlalo seCar Seatrest ayisiyiyo band entsha, kodwa banokuba njalo-phambili kunye nombhali wengoma uWill Toledo usixelele ngo-2015's CMJ ukuba singaze, nanini simamele ezo ngxelo zakhe zakudala kwiBandcamp, phantsi kwayo nayiphi na imeko.
Endaweni yokuba usinike izithsaba ezibini kunyaka ophelileyo-irekhodi lasekhaya Ulutsha lweSitayile kunye ne-studio yakhe eqaqambileyo, Ulutsha lokwala .
Njengoko izihloko zicebisa, amazwi kunye nemixholo iyagubungela apha ukupeyinta umntwana ojijelweyo, onelunda kunye nokuchaphazeleka kwamatye e-indie, ukuhambisa iPavumente kunye no-Yo La Tengo kunye nokuKhokelwa yiVoices njengoko ethelekisa abaqhubi abanxilileyo kwimikhwa yokubulala kwaye ethumela iqhawe lakhe kwindalo iphela .
Iingoma ezinje ngeCosmic Hero zisebenzisa kuphela izandi zookhokho abangoonyana be-CSH njengesiqalo ngaphambi kokuziguqula zibe zezabo, kwigumbi lokulala elingafaniyo nelincinci, njengoko iinkxalabo zikaToledo kwezakwalizwi kunye nentsingiselo yentlalo zihlala zisika nzulu kunaye nabani na owake walindela. Incoko yam naye uqinisekise kuphela ubunyani beembono zakhe ezinzulu malunga nokusilela kwesizukulwana sothando simahla kunye nobulumko beTestamente eNdala. Ukuba u-Toldeo uphonononge izimvo ezikufutshane kwinqanaba lemfundo, uyayenza ngelixa enxibe ingubo ye-crunch kunye ne-fuzz.
I-Wolf Parade enamandla kunye neferal ibuyile kulo nyaka, kwaye kunye nayo, iiprojekthi ezomeleleyo ezivela kwabaphambili uSpencer Krug noDan Boeckner. Elinye iqela likaBoeckner, abaSebenzisi, libonisa i-electro maven Devojka kwii-synths kunye nesigubhu seNew Bomb Turks uSam Brown ojikeleza iqela lomdaniso.
Ukuqala kwabo IBlue Wave pulsates enezixhobo zala maxesha ezisetyenzisiweyo kuqulunqo lwama-80s, ukunqwala ukuya kwiNew Wave ngelixa kuvakala ngathi kukuvela kweprojekthi ye-elektroniki yakudala yaseBoeckner kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe, uHandsome Furs. Ndibambelele kulawulo lwe-albhamu kuluhlu lwethu lweengoma, kodwa irekhodi iphela inokuba ikho ngenxa yokuba inokuguqula nakuphi na ukuhlangana okungahambelaniyo kwabahlobo okanye ukukhwela iimoto ngendlela engaginyisi mathe, kucamngca ngokungakhathali nokushukumisa iesile.
Njengesityalo esitsha esipheleleyo sabantwana abakhulele kwiLips eziMnyama nakwiMac DeMarco baqala ukukhupha iirekhodi ezizezabo, sibhiyozela ukuvuselelwa okuqhubekayo kwepunk enkulu yegaraji. IiHinds zaseMadrid azikhohlisi kangako njengokonwaba, zihlala zincuma, zidlala izixhobo zazo ngenqanaba lokwenyani langaphandle le-ramshackle, jangly ukulahla oko kwamkela amandla engoma elula.
Umqondiso omnye wempumelelo yabo-icwecwe labo lokuqala, Ndiyeke , uphume ngoJanuwari kwaye sele ekhutshiwe kwakhona. UAna waseHinds undixelele ukuba imfihlo yabo yimeko engagungqiyo yobudlelwane kunye nomphathi olungileyo. Zombini ezi zinto ziyabavumela ukuba basebenze iidonki zabo zingatshisi okanye zichasane. Kuphela ngoku babamba ikhefu elitshiswayo elilethwe leli tyala, kwaye lilungile. Ukuba Ndiyeke Ngaba kukho nawuphi na umqondiso, abalandeli baya kubambelela kubo ixesha elide, elide.
Sonke isichotho Ngaba ipiyano yaseRhodes kaEpstein! Umhlobo wasekholejini we-wunder mosa ye-elektroniki UNicholas Unyaka Ukhuphe i-LP yakhe yokuqala Crush kulo nyaka ukucofa kancinci, kwaye lihlazo.
Ukungcwatywa kwimbonakalo engathethekiyo ka-Epstein lilizwi elinyanisekileyo, elinomphefumlo, ngelixa uqeqesho lwakhe njengomdlali weempondo kwaye loo mqamelo uthandekayo u-Rhodes ujikelezisa isandi kakuhle. Crush yingqokelela ye-swirly, psychedelic dub kunye ne-R & B enokuthi ikwenze uzive ngathi uyakhubeka, kodwa i-croon ka-Epstein isika yonke imveliso kaJaar.
NjengoMartin, u-Epstein yenye yeemvumi zeseshoni ngoku ezifumana ilizwi lakhe njengegcisa lodwa, kwaye ngoku ndilungile ngento yokuba Crush ayazi ncam ukuba ifuna ukuba yintoni. Ndifuna ukubhala iculo lam kunye nokucula kwam kube kungokwemvelo kwaye kunamanzi njengokuchola uphondo nokudlala, wandixelela uEpstein ekuqaleni kwalo nyaka. Ukusebenza ukusuka kwindawo yokuziva kuqala kukuhamba ngobulumko, kwaye uluntu alurekhodayo kunye nalo lumnika sonke isithuba sokuzithemba.
Abalandeli bovavanyo lomculo kusenokwenzeka ukuba bevile I-Nils Frahm , Umqambi waseBerlin obekade ebeka izinto ezirekhodiweyo zeklasikhi ezihlaziyayo ngaphezulu kweminyaka eli-10. Ukuhlangana ndawonye nabahlobo bakudala ukwenza i-Nonkeen kunye nokukhupha iirekhodi ezimbini ezimangalisayo kulo nyaka kwakuthetha ukuba ucofa kunye nokurekhodwa okuphucukileyo okuvela kwiimitsi kunye nabahlobo bakhe kwi-patchwork ye-elektroniki, i-jazz ephuculweyo.
Ukucacisa igama labo kum, ilungu leNonkeen u-Sebastian Singwald uthe Ibinzana elenziweyo ekugqibeleni, esilithandayo. Emva kokuyithetha okwethutyana iba yinto yayo, lo mfiliba ungachazwanga. Ayinamdla kangako, ayijolisanga, mhlawumbi.
Ukubona ukuba uninzi kangakanani la ma-albhamu azalwe ngokuzenzekelayo, umbuzo wokuba iNonkeen iya phi ngokulandelayo iyabonakala inkulu. Kodwa ndiyathemba ukuba siva okungakumbi kwaba bahlobo bakudala-umculo lo wokuhambisa awuveli kwiingozi ezonwabisayo zodwa.
IChicago iWhitney ayiqambi nasiphi na isandi esitsha. Ukuba i-Americana yabo ebhalwe ngokuqinileyo ikhumbula iminyaka yegolide yeThe Band, inkokeli uJulien Ehrlich uhleli ngaphambili kunye neziko kwikiti yakhe yegubu kwi-riser will. NjengoLevon Helm, Ehrlich kunye co. Sebenzisa ii-tric sonic ezivela kwincwadi yengoma yaseMelika, njengesilayidi segitare kunye neempondo, kwiziphelo ezintsha. Oku kuhle kakhulu ndikulungele ukujonga ngaphaya kwengoma ye-reggae.
Thatha iimpondo ezinyangiweyo kuPolly, umzekelo, oqinisa amandla kaWhitney ngokuzaliseka okuqhelekileyo okuviwa ziimvumi kabini iminyaka yabo. Sele bebhukisha iindawo ezinkulu zonyaka ozayo, kubandakanya ne-brand entsha ye-East Williamsburg IBrooklyn Steel , kunye neengoma kwiqonga labo UkuKhanya Phezu kweLake bomelele ngokwaneleyo ukwenza ukuba ukunyuka kufanelekile.
I-albhamu yam yelizwe endiyithandayo yonyaka ivela eNew Zealand, jongana nayo. UMarlon Williams sele sele eyi-superstar engaphaya, ngaphandle kokukhulula i-solo yakhe yokuqala kulo nyaka. Ubunzulu bokubaliswa kwamabali kunye nobugqwetha bezwi obuvela kulo mntwana buvuthiwe ngokudidayo, nokuba ucula ngokungcwaba umntwana okanye ubomi bokuphila njengebhinqa eliselula.
Njengama-greats aqhelekileyo kwilizwe langaphandle, uWilliam uyawaqonda amandla okuphulukana nesazisi sakho ukubalisa ibali elimnandi, kwaye le rekhodi igcwele ngabo. Yinto ebaluleke kakhulu ukukwazi ukuyenza, ukujonga kunye nokuphalaza izikhumba, wandixelela. Kuyomeleza ngokwenene njengomntu oyilayo.
Phakathi kokukhulula ityala lakhe elikufutshane Malibu kunye nokulahla i-mixtape embi kunye nomvelisi oqaqambileyo we-Stone's Throw Knxwledge, Anderson.I-Paak ibe nesihogo esinye sonyaka.
Kwenye indawo phakathi komrepha kunye nemvumi, uPaak ngumbhali weengoma onqabileyo oqondayo ukuba usenza njani isandi sokuhamba. Usisihogo somdlali ophilayo odlale enye yezona iiseti zibalaseleyo kumnyhadala wePanorama walo nyaka.
Kukho isizathu sokuba le dude isebenze nawo wonke umntu ukusuka kwi-Disclosure ukuya kwi-BadBadNotGood ukuya IKaytranada (ngubani esifanele simthathele ingqalelo imbeko ebekekileyo kuMculi oMtsha oMtsha). Ulawula ukuhanjiswa kwakhe kwaye uyazi ukuba asebenze njani isihlwele, esondla kumjelo weqela lakhe, i-Free Nationals, kwaye ehleli kwikiti yakhe yegubu xa ingoma iyifuna.
[bandcamp ububanzi = 350 ukuphakama = 470 albhamu = 1925251160 ubukhulu = bgcol enkulu = ffffff linkcol = 0687f5 tracklist = false]
ULou Reed akafanga, uhlala nje eHalifax. Emva kokukhulula ngokuzolileyo ukuqala kwabo ukuqala konyaka ophelileyo, uNap Eyes wandinyathela kulo nyaka ngamnandi Isikali seNtlanzi yokuLinga , zigcwele ngokucotha ukwakha iingoma njengelaconic njengoko igama labo libonisa.
Oku kuya kuba lilitye elinomzimba, ukuba i-slackers ibuza imibuzo enentloko malunga nokungagungqi kolwazi kunye ne-naiveté yokuthembana.
Ipakishwe ziimvumi ezithatha ixesha labo ukuba zinomtsalane kuwe, eli cwecwe liphelile ngaphambi kokuba ulungele ukuba libe njalo. Kwaye apho ndivela khona, yile nto siyibiza ngokuba kukuhlala amandla.
I-albhamu ezingama-20 ezigqibeleleyo zeJazz zika-2016
Iingoma ezingama-50 ezigqwesileyo zika-2016
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Hip-Hop zika-2016
I-albhamu ezili-10 ezilungileyo kakhulu zokulinga ngo-2016
Iirekhodi eziGqithisiweyo eziGqithisiweyo zango-2016
IiAlbhamu eziPhambili zeJazz eziPhila ngo-2016
Ezona ndidi ziBalaseleyo zeJazz zango-2016
Ama-25 aPhambili okuBuya kwakhona ngo-2016
Iincwadi eziMnandi zeMculo zika-2016
I-albhamu ezili-10 eziPhambili eziPhila ngo-2016
Ii-imeyile ezitsha zityhila u-Obama, iiClintons eziKhuselweyo zokuKhuselwa kweKholera eHaiti
Ulwaneliseko lwe-Fossil luya phezulu ngokuchasene neApple ngeVapor X Smartwatch
IPentagon kufuneka ilushiye uphando lwe-UFO koSosayensi, uHarvard Astronomer uAvi Loeb uthi
I-Nut-Wing Nut ka-David Clarke ifumana njani kwicala elilungileyo likaDonald Trump
iimveliso zokukhuthaza ukukhula kweenwele
amadoda okugqibela emhlabeni
miranda kerr evan spiegel elunxwemeni
akukho semthethweni ukuba nengwe
UStanley grafton oswelekileyo, jr.